Somaliland: Maamulka Gobolka AWDAL Oo Sheegay Inay Ku Filan Yihiin La Dagaalanka Cudurka Shuban-biyoodka Oo Ka Dillaacay Boorama - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Maamulka Gobolka AWDAL Oo Sheegay Inay Ku Filan Yihiin La Dagaalanka...
Somaliland: Maamulka Gobolka AWDAL Oo Sheegay Inay Ku Filan Yihiin La Dagaalanka Cudurka Shuban-biyoodka Oo Ka Dillaacay Boorama
Badhasaabka Gobolka Awdal Mustafe Cabdi Ciise (Shiine) iyo Maamulka Cisbitaalka Guud ee Magaalada Boorama, ayaa si wada jir ah uga hadlay Xanuunka Shuban-biyoodka oo Dad uu hor leh oo uu soo ritay lagu daaweynayo Cisbitaalkaasi.
Dadkan Xanuunkani soo ritay oo qaarkood yihiin kuwii Abaaruhu barakiciyeen iyo Dumar iyo Carruur laga keenay deegaannada ku dhow Boorama, ayaa waxa Xaaladdooda Caafimaad la tacaalaya Dhakhaatiirta Cisbitaalkaasi ka hawl-gala.
Isku-duwaha Wasaaradda Caafimaadka ee Gobolka Awdal oo halkaa ka hadlay ayaa sheegay “Maalmaha waxa jira in Xanuunka Shuban-biyoodku ka dillaacay deegaanka, gaar ahaan Boorama. Xanuunkana waa wax yimaadda Xilli roobaadyada, waa Xanuun lala tacaalo, laakiin u baahan in laga war-hayo.” Ayuu yidhi Isku-duwahu.
Agaasimaha Cisbitaalka Boorama oo isaguna ka hadlayey Daawooyin uu Maayarka Boorama gaadhsiiyey, ayaa sheegay inay Cisbitaalka ku dabiibayaan Dad uu Xanuunka Shuban-biyoodku soo ritay, “Dad la daweynayo oo Waadhadhka jiifaa way jiraan, illaa hadda Cid Gacanta noo soo gashay oo Innagaga dhimatay (Shuban-biyoodku) ma jirto.” Ayuu yidhi Agaasimaha Cisbitaalka, inkasta oo aanu sheegin Tirada Dadka uu soo ritay Xanuunkani ee Cisbitaalka la jiifiyey.
Badhasaabka Gobolka AWDAL Mustafe Cabdi Ciise (Shiine) oo isaguna ka hadlay Xanuunka Shuban-biyoodka ee ka dillaacay Boorama ayaa yidhi “Xanuunkani maaha wax innaga awood badan oo aan waxba laga qaban kareynin, Dadkii Shalay (Doraad) Cisbitaalka la soo gaadhsiiyeyna way Caafimaad qabaan, qaarna Guryahoodii bay ku noqdeen. Markaa Xanuunkani waa Xanuun aynu wax ka qaban karno, oo maaha Xanuun weyn ee waa inaynu sheegno in Xanuunkani yahay mid aynu Gobol ahaan iyo Dawlad ahaanba aynu wax ka qaban karno.”